ချိန်ကိုက်မိုင်းတွေ ဆက်တိုက်တွေ့နေတဲ့ မြဝတီမြို့ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားမြေမြှုပ်မိုင်း ကွင်းထဲမှာ ရှင်သန်ကြသူများ“မိုင်းက လုံးဝ အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ တိုက်ပွဲ တခုပါပဲ”ကယား ဒေသခံများ မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ် ဆက်လက်ခံနေရမြွေတောင်ဖားတောင် စီမံကိန်း စတင်မည်ကို တီးတိန် ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ
mr TM December 4, 2012 - 8:23 pm လက်ပံတောင်းတောင်အကြမ်းဖက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ရေးနဲပါတ်သက်ပြီးဟိုလူမပါတော့ဘူးဒီလူမပါတော့ဘူးဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူဟိုလိုမဖြစ်တော့ဘူးဘူးတွေထပ်နေတယ်၊ရခိုင်အရေး အခင်းတုံးကတော့ကော်မီရှင်မှာပါရလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကနေ့အထိမိမိရရဘာတခု မှမပြနိုင်သေးဘူး။ဒီလိုအရေးပေါ်ကိစ္စတခုကိုအမြန်ဆုံးဖေါ်ထုတ်ရမယ့်အရေးကိုဟိုလိုလိုဒီလိုလို နဲ့မျှေားနေတယ်၊တရာခံအစစ်တွေကပါလီမန်နဲ့ဝန်ကြီးရုံးတွေမှာခြေချိတ်ပြီထိုင်နေကြတယ် သမတကြီးနဲ့အစိုးရကကမ္ဘာကိုလိမ်နေတယ်။ကနေ့သံဃာတော်တွေကိုမီးလောင်ဗုံးတွေနဲ့ သတ်ဖို့ကြိုးစားမှုကြိုးကိုင်သူဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တရုပ်ကုမွဏီလဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊သမတ ကြီးကိုယ်တိုင်လဲဦးပိုင်ရဲ့ရှယ်ယါဝင်တဦးဘဲ။ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ဖြစ်လာခြင်ရင်သံ ဃာနဲ့လူထုပူးပေါင်းပြီစစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာဘဲ။
Reply mm December 4, 2012 - 8:50 pm ၈၈ တွေ က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ. ထဲဘာလို. မပါချင် ရတာလဲ ဘေးထိုင် ဘုပြော ပဲ လုပ်တော.မယ်နဲ.တူတယ်
Reply min min December 5, 2012 - 6:46 am ဒေါ်စုလဲ မူမမှန်တော့ဘူးလေ . န၀တ မှိုင်းမိနေပြီလေ.. ဒါကြောင့် ၈၈ လူငယ် တွေ ရှောင်သွားတာလေ…..
Reply yemyn December 5, 2012 - 10:45 am Mr.President, You and your government ministers are totally wrong for problem solving in this event.
Reply Maung Myo December 5, 2012 - 1:35 pm Military officers took the high levels of police post
Reply swe htwe December 5, 2012 - 1:51 pm Anyone who command to make brutal attack on unarmed people must be punished. Who is responsible for this. We think 88 make the right decision because U than myint and like-him man take part in comission. U than myint must resigned from comission and hluttaw. His words about this fatal event is very dangerous to find the truth.
Reply Kachin lady December 5, 2012 - 2:11 pm ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အတူတကွဝိုင်းလုပ်ဖို့အချိန်မှာ ဟုိုလူက ဦးဆောင်မှာမို့လို့၊ သူက ဥက္ကဌဖြစ်မှာမို့လုို့ မပါဝင်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို ဘယ်လိုနားလည်ပေးရမလဲ။ ကျမတို့ နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာ (အထူးအရေးကြီးတဲ့ကာလမှာ) Power Space ထူထောင်ဖို့ဦးစားပေးနေမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကတော့ နောက်ကျကျန်ခဲ့မှာ အမှန်ပဲ။ ဝိုင်းလုပ်ကြပါ။ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းစေလိုပါတယ်။ Power Space က နောက်မှ သူ့ဟာသူ မလိုချင်ရင်တောင် ရလာမှာပါ။။ အစိုးရရဲ့ Divide and Rule က အရမ်းအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာ မြင်သာပေမယ့် အရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပေးဆပ်သူအားလုံးကို လေးစားပါတယ်။။
Reply thihamin December 5, 2012 - 10:21 pm မဆလာ(မဆလ)၊ နဝေတိမ်တောင်(န၀တ)၊ နွားအဖွဲ့(နအဖ)စသဖြင့်ပေါ့လေ။ သူတို့က သံဃာဂိုဏ်းသင့်မှာလည်းမကြောက်သလို၊ လေးကိုင်းလည်းမမှုပါဘူး။ ဂျင်ကလိကတော့ နည်းနည်းအဟန့်ရှိတယ်။
Reply ဝန်ထမ်းတစ်ဦး December 6, 2012 - 6:29 pm ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ ကိုယ်ကျိုးအတွက်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့် သမားတွေပါ။ အခုဖြစ်ရပ်မှာ တာဝန်ရှိသူကတော့ သမတ ပါပဲ။ရှင်းရှင်းလေးကိုရှုတ်အောင် ကော်မတီဖွဲ့တာတွေဘာတွေလုပ်နေ တာကို သိသာပါတယ်။ ဘယ်သူကမှတော့ အားအားယားယား ထလုပ်မှာ မဟုတ်ပါ။ ခိုင်းတဲ့သူ ရှိနေလိုပါ။ အခု အခိုင်းခံ တွေကို ထိုးချ စတေးပြီး သူတော်ကောင်း လုပ်အုန်းမှာပါပဲ။ ဝန်ထမ်းတွေကို ဂုဏ်သိက်ခါမဲ့အောင်လုပ်ပြီး အရေးယူပြပါလိမ့်မယ်။
Reply heinsein December 10, 2012 - 2:23 pm အဲဒီမှာထွက်နေတဲ့ သတ္တုတွေမှာ ရွှေ (သို့ မဟုတ် ) ယူရေနီယံ တွေပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း